Qalabka Waxsoosaarka | Zigong City Xinhua Warshadaha Co., Ltd.
Khadka Wax-soo-saarka Qalabka ee hogaaminaya Warshadaha
Agathon shiidi Machine
Shan-dhidibka CNC Machining Center
Buufin Granulation Tower
Mashiinkaani wuxuu ku habboon yahay qashin -qubka centrifugal ee dhoobada, alaabada kiimikada iyo agabyo kale. Waxay si gaar ah ugu habboon tahay agabyada leh shuruudo gaar ah sida carbide sibidh tungsten carbide carbide, alaabada dhoobada elektiroonigga ah, alumina, xabagta birta, carbide tungsten, iwm. granulating wheel atomizer, shape spherical Dareeraha badeecadu waa fiican yahay, cufnaanta badeecada la cadaadiyayna way sarraysaa. Marka la barbardhigo tiknoolijiyadda dhagaxa dhagaxa ee kubbadda dhaqda, budada granulated buufiyo ayaa leh qaab isku mid ah, oo carbide -ka sibidhka la soo saaray ayaa ka tayo fiican.
Cadaadiska Hoose ee Sintering foorno
Foornada sintering-ka ee cadaadiska hooseeya waxay la jaanqaadi kartaa shaqooyin badan sida dewaxing, sintering vacuum, sintering-low pressure, processing low-pressure, iyo jawi jahawareer. Waxaa inta badan loo isticmaalaa sintering-cadaadis hoose ee alaabta la cadaadiyay, processing-cadaadis hoose ee alaabta sintered iyo sintering carbon-hagaajinta ee alaabta cadaadisay. Shaqada ugu weyn ee sintering cadaadiska hoose waa in la yareeyo daloolada microscopic ee carbide sibidhka. Daloolada ku jira jirka sintered ayaa la tirtiray inta lagu gudajiro marxaladda sinkuleynta. Marxaladda degdegga ah ayaa inta badan ah in la tirtiro daloolada microscopic -ka.
Vacuum foornada sintering
Kulaylinta xaaladaha faaruqinta, demuxuminta faaruqinta iyo qulqulka ayaa gacan ka geysta ka saarista nijaasta, hagaajinta nadiifnimada jawiga qulqulaya, hagaajinta qoyaanka wejiga weelka, iyo dhiirrigelinta falcelinta. Inta lagu guda jiro geedi socodka sintering oo dhan, jirka sintered waa cufan ku dhowaad lahayn porosity, iyo taxane ah oo saamaynta jirka iyo kiimikada iyo hagaajinta qaab -dhismeed ayaa la soo saaray, iyo ugu dambayn carbide sibidh oo cufan leh oo ka kooban kiimiko gaar ah, sifooyinka jirka iyo farsamada, iyo
Qalabka cabbirka sawirka qalabka
Marka la cabbirayo, sawirka aaladda cabbiraadda aaladda ayaa isku hagaajineysa oo cabbiraya aaladda laba jiho. Waxay ogaan kartaa cabbirka X-dhidibka, dhidibka Y, dhidibka Z, dhidibka wareegga muraayadda jiifka, iyo wareegga aaladda ee hal mar, oo iska ilaaliya faasasyo badan. Khaladka la sameeyay intii lagu jiray isku-shaandhaynta labaad, isku-shaandhaynta isku-beddelka saxda ah ee koxial-ga ayaa loo adeegsadaa muraayadda laba-geesoodka ah, taas oo si weyn u fududaynaysa cabbirka. Dhexroorka, dhererka, kala -goynta geeska, xagal rakhiis, xagal dambe, iyo xagal helix ee aaladda ayaa lagu dhammeyn karaa hal mar. Cabbiraad sax ah oo cabbirro kala duwan leh sida xagasha hoos -u -dhaca ugu weyn iyo xagalka leexashada labaad